Soo dejiso Nardi FN-333 Riviera X XXX (Waafaqsan FS1.0) - Rikoooo
downloads 25 838
Window Compatibility 10 + FSX Steam + P3D v2
jaanqaadaan FSX iyo FS2004. Xulasho ka rakibaha. Kani waa Talyaani yar xinjiroole deked badeed, waqti firaaqeed, oo ay ka dambeeyaan makiinada gadaal gadaal ka riixeyso. Waxay ku soo degi kartaa biyaha iyo dhulka, oo ku filan socod lug leh! Tayada muuqaalka waa mid aad u fiican, run ahaantii wax qalad ah ma jiraan, gudaha ayaa sidoo kale aad u qurux badan. Wax walba waxaa lagu qaabeeyaa 3D.
Dhawaaqa ayaa u muuqda kuwa macquul ah isla markaaba na dhex geliya qalabka. Boorsada ayaa shaqeyneysa oo dhammeystiran.
Ha iloobin inaad aqriso tilmaamaha ku jira feylasha soo socda: FN333_check.htm, iyo FN333_ref.htm panel_FN333.htm more redme.txt
Max. Xawaaraha S / L: 177 mph
Xawaaraha Stall (Ldg. Config.): 68 mph
Xawaaraha Cruise (70% pwr): 164 mph
Xawaaraha Cruise (60% pwr): 152 mph
Isticmaalka Shidaalka: 11.1 gal / saac
Shaqo joojinta: 18 500 ft
TO orda (dhul): 950 ft
INTA ord (biyo): 1565 ft
Orodka dhulka (Dhul): 660 ft
Socodka dhulka (biyo): 625 ft
Range: 625 mayl
Diyaaradda Icon A5 FSX & P3D